२०७९ को बजेटमा सरकारले कस्तो योजना ल्याउनुपर्छ ? | Seto Khabar
कञ्चनपुरमा जीपको ठक्करबाट दुई जनाको मृत्यु
बोदेवर्साइनको नगरप्रमुखमा यादव निर्वाचित
इलामको सूर्योदय नगरको मेयरमा एकीकृत समाजवादीका राई विजयी
धनगढीमा स्वतन्त्र उमेदवार हमालको ११ हजारको मतान्तर
काठमाडौँमा बालेनले कटाए ३३ हजार मत
विराटनगर महानगरमा कांग्रेसका कोइराला विजयी, उपमेयरमा एमालेकी शिल्पा
अछामको साँफेबगरमा पुनः मतदान सम्पन्न
म्यादी प्रहरीलाई बिदाइ
सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक अर्यालबाट दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान
राष्ट्रपतिले जेठ १० गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने
१० औं नेपाल अफ्रिका फिल्म फेस्टिबल : नेपाल सहित १५ देशका २६ फिल्म चयन
२०७९ को बजेटमा सरकारले कस्तो योजना ल्याउनुपर्छ ?
२०७९ बैशाख ६, मंगलबार (१ महिना अघि)
काठमाडौँ । नेपाल सरकारले २०७९ को बजेट ल्याउने योजना बनाउँदै छ । बजेट ल्याउनका लागि अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न निकायसंग छलफल गरेर अघि बढिसकेको छ । हरेक बर्षको जेठ १५ गते अर्थ मन्त्रालयले सदनमा बजेट पेश गर्नैपर्छ । यो मितिमा बजेट ल्याउनु पर्छ भनेर २०७२ को संविधानमा उल्लेख छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक तरलताका बिच कस्तो बजेट ल्याउलान् ? अहिले सर्वत्र चर्चाको विषय बनेको छ ।
पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र डामाडोल बनेको विषयमा कोहि अनविज्ञ छैनन् । जसका कारण आम नागरिकहरुले सरकारी खर्च कटौती देखि लिएर तलब भत्ता पनि आधा गनुपर्न माग राख्दै आएका छन् । त्यस्तै, ज्येष्ठ नागरिक भत्ता र पेन्सन वाला कर्मचारीको पेन्सन पुरा कटौती गर्न जनताहरुले पटक पटक भनिरहेका छन् ।
तत्कालको लागि सरकारी गाडी किन्न छुटाइने बजेट पनि स्थगित गर्नुपर्नेमा अर्थविद्हरुको जोड छ । अब आउने बजेटमा करको दायरा बढाउन अर्थविद्हरुले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । घर धनीलाई मात्रै करको दायरामा ल्याउन सक्यो भने अर्बौं राजस्व उठ्नेमा उनीहरु विश्वस्त देखिन्छन् ।
जस्तै घर धनीले घर जग्गामा गरेको लगानी बापत राजस्व उठाउन सक्नु पर्यो । किनकि घर धनीहरुले लगानी बापत कर तिरेका छैनन् । एउटा घरमा दुई करोड देखि अर्ब रुपैंयासम्म लगानी गरिएको छ । मासिक पचास हजार देखि ६ करोड सम्म घरवहाल उठाइरहेका छन् ।
राज्यले यस बाट पनि राजस्व पाएको छैन । घरको अवस्था कस्तो छ ? मान्छे बस्न ठिक छ कि छैन ? चेकजाँँच गरेर स्टिकर लगाईदिनु परयो । अवस्था ठिक भएकोलाई हरियो र नभएकोलाई रातो स्टिकर द्धारा छुटाउनपर्छ । राजस्व उठाउनलाई घरहरु घरेलु र कम्पनीमा लगेर पञ्जीकरण गर्नै निति कार्यान्वयनमा ल्याउन पर्छ ।
घरेलु र कम्पनीमा जान अटेर गर्ने घरधनीहरुलाई सम्पुर्णताको प्रमाण पत्र दिनमा रोक लगाउनु पर्छ । त्यस्ता घरहरुलाई किनबेचमा प्रतिबन्ध लगाइनुपर्छ । सरकारले कर्मचारी खटाएर घरवहाल उठाउने व्यवस्था आगामी बजेटमा राख्न पर्छ । यो नियम लागु गर्दा लाखौं नेपालीले नेपालमै रोजगार पाउँछन् ।
ठाउँ हेरेर एउटा सामान्य कोठाको मासिक सात देखि दश हजार सम्म भाडा लिने गरिएको छ । त्यसै गरी एउटा सटरको दश हजार देखि आठ लाख सम्म उठाउने गरिएको पाइन्छ । वडा र घरधनीको मिलोमतोमा दश हजारको राजश्व दुई सय र आठ लाखको हजार तिर्छन् । वडाका कर्मचारीहरु निकम्मा हुँदा राज्यले बर्षनी अर्बौं रुपैया राजस्व गुमाइरहेको छ ।
कोठा भाडा र सटर भाडा घरधनीको जिब्रोले निर्धारण गर्छ । अब सरकारले नै घरवहाल निर्धारण गरिदिनु पर्छ । घरभाडा मंहगो लिन्छन् तर सेवा सुविधा दिदैन् । कोठामा बस्नेहरुले मंहगो वहाल तिरे पनि राज्य रित्र्तै छ । सरकारले ल्याउन लागेको बजेटमा यी बिषयहरु समावेश गरिनु पर्छ । त्यस्तै, निजी सवारी साधनलाई पनि करको दायरामा ल्याउन पर्छ ।
सार्वजनिक सवारी साधनझैं प्रत्येक चार महिनामा रोड परमिट छ महिनामा जाँचपास र घरेलु र कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण गर्ने निति ल्याउनु पर्छ । दुई पाङग्रे सवारी साधनको प्रदेषण चेक गर्ने र स्टिकर टाँस्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । एउटा निजी सवारी साधनमा तीन लाख देखि तीन करोड सम्म लगानी गरेको छ ।
सबै भन्दा बढी दर्ता निजी प्लेटकै सवारी साधन छ । जसले राज्यलाई राजस्व तिरदैन ? तर, बाटोमा लगानी सरकारको छ । दुई पाङग्रे सवारी साधनले प्रदेषण चेकजाँच नगरेको खण्डमा नामसारीमा रोक लगाउने र चार पाङग्रे सवारी साधनले पनि पञ्जीकरण गरेन् भने नामसारीमा रोक लगाउनु पर्छ ।
सरकारले अगामी बजेटमा यी निति ल्याउन सके राज्यको ढुकुटीमा राजस्व उठछ । पछिल्लो समय अधिकांशको लगानी भनेको घर जग्गा र निजि प्लेटको सवारी साधन नै हो । तर, यहाँ बाट उठ्ने राजस्व शुन्य बराबर छ । अबको बजेट भाषणमा खेती योग्य जमिनमा घर बनाउन नदिने, जसलै खेती योग्य जमिनमा घर बनाएको छ उसलाई थप कर लगाउने ।
एक चौटी घर भत्किएपछि उक्त जग्गामा घर बनाउन नदिने । खेती गर्ने किसानलाई कर छूट दिने । अनि उब्जनि हुने जमिन मासेर बाटो बनाउने कामलाई रोक लगउनु पर्छ । यातायात व्यवसायीहरुले विभिन्न चीजमा तिर्न पर्ने राजस्व विगत तीस बर्ष देखि बढेको छैन ।
सवारी साधनको जाँचपास, रोडपरमिट, बिलबुक नविकरण, प्रदुषण, पञ्जीकरण, अञ्चालीकरण, पटके,बीस बर्षै गाडी स्क्याब, नामसारी, रङ् परिवर्तन, जेब्रा क्रसमा गाडी नरोक्दा कारवाही वापत लिनु पर्नै राजस्व बढाएको छैन । यता, सरकारले तोको भन्दा बढी भाडा यात्रु सँग लियोको खण्डमा कारवाही वापत लिनु पर्ने राजस्व पनि बढाएको छैन ।
ट्याक्सीको मिटर जडान वा नविकरण गर्दा सरकारले लिनु पर्ने राजस्व पन बढाएको छैन । २०४९ साल देखिनै यी चीजको राजस्व यथावत् नै छ । सरकारले यी बिषयमा राजस्व उठाउने हो भने नेपाललाई विदेश ऋणको खाँचो पर्दैैन । खेती योग्य जमिन मासिदैन भने खाद्यान्नमा संकट आउँदैन । व्यापार घाटा पनि कम हुन्छ ।
धेरै देखेपछि पछिल्लो समय वित्तिय संस्थाले निजी सवारी, घरजग्गा र सेयरमा लगानी बढ्दो छ । यी शीर्षकमा लगानी बढाउदा मुलुकमा आर्थिक तरलता बढ्यो । वित्तिय संस्थाले किसानहरुलाई कर्जा प्रवाह गर्ने हो भने मुलुकमै खाधान्न उब्जनी हुन्छ । सरकारले बजेट कार्यक्रममा यी निति समावेश गर्दा मुलुकलाई फाइदैफाइदा हुन्छ ।
एआईजीमा बढुवा भएका लामाले लगाए दर्ज्यानी चिन्ह
कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकामा राप्रपाको शुरुवाती अग्रता
नार्पाभूमिमा लामा र चामेमा घले विजयी
आज बैशाख ३१ गते शनिबार , कस्तो छ तपाईको दिन ? हेर्नुहोस् ! राशिफल
बुटवलमा ३०० मत गन्दा कांग्रेसकाे अग्रता, पछ्याउदै राप्रपा
काठमाडाैंकाे शंखरापुर नगरपालिकाको मेयरमा एमालेको अग्रता
स्थानीय तह निर्वाचन : ३९ स्थान कांग्रेसको अग्रता, दोस्रोमा एमाले